सबैभन्दा कन्जुस यी राशिका मानिस हुन्छन्, तपाईको कुन राशि ? – Sandesh Munch
September 30, 2020 171
राशिले व्यक्तिसँग जोडिएका कयौँ आदतका बारेमा बताउने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन राशिका व्यक्ति निकै क’न्जूस हुने गर्दछन्। यिनीहरु पौ खर्च गर्नमा भन्दा पैसा बचत गर्नेमा विश्वास गर्ने गर्दछन्।
मेष राशिका व्यक्ति अरुका सामु झु’टो सान देखाउनेमा विश्वास गर्दैनन्। यिनीहरु फाल्तुमा पैसा खर्च गर्नु बकवास हुने सोच राख्दछन्। मेष राशिका व्यक्ति निकै मेहनती हुने गर्दछन् र यिनीहरु आफ्नो मेहनतको कमाई सोचविचार गरेर मात्र खर्च गर्ने गर्दछन्।
कर्कट राशिका व्यक्ति अधिक ख’र्चालु हुँदैनन् र मेहनत गरेको कमाएको पैसा संचय गर्नु पर्ने सोच राख्ने गर्दछन्। यिनीहरु फा’ल्तु खर्च गर्दा आफूले मेहनत गरेको सम्झने गर्दछन्। यस राशिका मानिस निकै समझदार हुने गर्दछन् र पैसा खर्च गर्ने मामिलामा सोच विचार गरेर मात्र गर्ने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा क’न्जूस गर्ने गर्दछन् र पैसा बचत गरेर राख्ने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा पैसा जोड्नका लागि केही क’ठिनाई समेत सहन गर्ने गर्दछन्।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कन्या राशिका मानिस सबैभन्दा बढी क’न्जूस हुने गर्दछन्। फा’ल्तु मात्र हैन आफ्नो आवश्यकतामा खर्च गर्न पनि यिनीहरु लो’भ गर्ने गर्दछन्। कन्या राशिका मानिस ल’जालु स्वभावका हुने गर्दछन्। तर पनि यिनीहरु भित्र अनजानमा क’न्जूसको भावना पैदा हुने गर्दछ।
सामान्य लाइफमा धेरै भरोसा गर्ने वृश्चिक राशिका व्यक्तिको स्वभाव हुने गर्दछ। साथै कम पैसा खर्च गर्ने यिनीहरुको स्वभाव हुने गर्दछ। यिनीहरु आफै पैसा खर्च गर्दैनन् र परिवार तथा पार्टनरले पैसा खर्च गर्दा रि’साउने गर्दछन्।
Prevआज असोज १४ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस।
Nextश्रीमतीले तपाई बुढो हुनुभयो भनेर ‘गा’ली’ गर्छिन् ! अब के गराैँ ?
हजुरले आटेको सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं
१ घण्टाकै १२ लाख कमाउने यी युवती; कसरी कमाउँछिन्? काम देखेरै सब अ’चम्मित…
कोरोना रोक्न सफल हङकङमा पनि पुनः देखिन थाल्यो संक्रमण
सिंगापुरबाटै लाहुरेको यस्तो पत्र, गोप्य फोटो देखि पूर्वप्रेमी सबैको खुलाशा (हेर्नुहोस भिडियो)
मनकामना मन्दिरको दर्शन सँगै आज १६ मंसिर मंगलवारको राशिफल पढ्नुहोस,
उठ्ने बितिकै पाथिभरा माताको दर्शन गरी आज – १६ मंसिर मंगलवारको राशिफल पढ्नुहोस,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस